यो के खाँदै छौँ हामी ? « मेचीखबर
यो के खाँदै छौँ हामी ?
२५ असार २०७३, शनिबार ०६:५८
झापा । राजधानीमा सबैभन्दा बढी खपत हुने खाजा हो, ‘मःम’ । त्यसमा पनि ‘बफ मःम’ धेरैको रोजाइमा पर्ने गर्छ । मःम बनाउने कच्चा पदार्थ (राँगा, भैँसीको मासु) भने कल्पनै गर्न नसक्ने दुर्ग्न्धित र अस्वस्थ पाइएको छ । केही दिनदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरिरहेका आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार राजधानीका वधशालामा कस्तो मासु फेला पारे ?
मासु काट्ने वधशाला सफा र सुग्घर हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, त्यहाँको दृश्य ठीकविपरीत थियो । जताततै फोहोरको दुर्गन्ध मात्र होइन, सेता किरा स्याउँस्याउँ कुदिरहेका थिए । ती किरा मासु खाने र फर्कने गरिरहेका थिए । सञ्चालकले प्लास्टर गरिएको भुइँ कतै सफा नराख्दा किरा परेको थियो । त्यस्तै जताततै रगतको छिटा देखिन्थ्यो । हाडखोरको थुप्रो त्यहीँ एक कुनामा थियो ।
वधशालामा रोगी राँगा र भैँसी काट्ने गरेको पनि पाइएको छ । रोग लागेका राँगा, भैँसीको मासु खाँदा विभिन्न रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, सञ्चालकले सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले रोगी र बुढो भैँसी विभिन्न स्थानबाट ल्याउने र वधशालामा काट्ने गरेको टोलीले फेला पार्यो ।
‘वधशालामा राखिएका राँगा, भैँसी अस्वस्थ र रोगी देखिन्थे,’ अनुगमन टोलीकी सदस्य उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले भनिन् । राँगा, भैँसी राख्ने ठाउँमा ग्याजग्याज हिलो थियो, वरिपरि झिँगालगायत रोग फैँलाउने अन्य किरा भन्किरहेका थिए ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।